इन्टरनेट सेवा र भाडा आवास फेला मदत रूपमा?
इन्टरनेट उद्योग घर छोडेर बिना सेवाहरूको एक किसिम रमाइलो गर्न मौका दिने, पागल गति बढ्दै छ। यो सुविधाजनक, छिटो, सहज छ। यसबाहेक, धेरै अवस्थामा, धेरै बाहिर सुरक्षित। यो मुख्यतया वेब कम्पनीहरु कार्यालय स्पेस भाडा लागि पैसा को भारी मात्रा खर्च गर्न आवश्यक छैन भन्ने तथ्यलाई कारण छ। साथै, कर्मचारी मा बचत भूल छैन। अर्डर इच्छित प्रभाव प्राप्त गर्न को निपटान व्यापार को वेब-अभिमुखीकरण सबैभन्दा कुशल माध्यम सक्षम बनाउँछ।
छिमेकी कहाँ फेला पार्न?
विशिष्ट उदाहरण विचार गर्नुहोस्। के, भन्नु, तुरून्त मास्को मा एक कोठा या एक घर भाडामा आवश्यक भएमा? हाम्रो देश को औसत नागरिक भाडामा शायद यो किन्न सक्छन् प्रति महिना 30 हजार rubles को एक औसत मूल्य संग, भन्न अनावश्यक। तसर्थ, हामी तुरुन्तै तपाईं मास्को मा आवास आवश्यक छ भने, त्यसपछि, भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ "म एक रूममेट खोजिरहेको छु।" यस मामला मा, कोठा दर आधा द्वारा कम छ। निस्सन्देह, सबै क्षेत्र, क्षेत्र, अतिरिक्त सुविधाहरु मा निर्भर गर्दछ, तर मूल्य सामान्यतया छ देखि पन्ध्र हजार दायरा।
र अब केही कि आवास को लागि खोज रूपमा यस्तो नाजुक मुद्दा मा मद्दत सेवाहरूको। हामी, उदाहरणका लागि कुनै पनि विशिष्ट स्रोतहरू नाम छैन, आवास को क्षेत्र मा इन्टरनेट सेवा को बजार जानकारी भरिएको छ भनेर। अद्वितीय सेवाहरु को एक किसिम यो सम्भव हाम्रो विशाल देश को हरेक कुना मा एक छिमेकी फेला पार्न। यसले कसरी काम गर्छ? पहिलो विधि: मानिस चासो मापदण्ड को आफ्नो विशेष क्षेत्र परिचय। यो एक छिमेकी, मूल्य, छिमेकी, पट्टा अवधि र यति मा को सेक्स हुन सक्छ मानौं। वास्तवमा, फिल्टर को एक किसिम पर्याप्त भन्दा बढि छ। मुख्य स्पष्ट लागि देख भनेर थाह छ।
लेखक विज्ञापन, तिनीहरूलाई लागि महत्त्वपूर्ण मापदण्डहरू गर्न पालो, बिन्दु मा। थप अक्सर यस्तो लुगा धुने मेसिन वा टिभी कुनै पनि सुविधाहरु, अस्तित्व आवश्यक छ भन्दा। लगभग हरेक तेस्रो आवेदक रूपमा विज्ञापन छ, ध्यान र खराब बानी छल्न छैन निम्नानुसार: "म छिमेकीको पिउने होइन र धूमपान छैन।"
विज्ञापन को हजारौं तपाईं उपयुक्त केहि पाउन सक्नुहुन्छ भने, किनभने तपाईं आफ्नो माग दर्ता जो तपाईंको आफ्नो सन्देश सधैं राख्न र विस्तार इच्छा गर्न सक्छन्, निराशा गर्छन्।
जीवित स्पेस चयन
एक पटक एक साथी वा साथी फेला, यो टाइप गर्न खोजी जादू समय छ - "। मास्को मा रहन" र यहाँ स्रोतहरू को विकल्प र बस अचम्मलाग्दा आफ्नो क्षमता छ। सजिलै तपाईं तस्बिरहरू वा 3-डी भ्रमणमा भविष्यमा अपार्टमेन्ट को स्थिति, हामी स्वीकार गर्न हुनत, हालै एक rarity सम्म आकलन गर्न सक्छन्। साथै, लगभग सबैतिर त्यहाँ नक्सामा अपार्टमेन्ट वा घर को स्थान हेर्नको लागि मौका छ। यसबाहेक, अब मात्र आफ्नो आवश्यकता अनुसार विज्ञापन खोज फिल्टर मेट्रो स्टेशन, जहाँ यसलाई स्थित गर्नुपर्छ भविष्यमा आवास बीच सयौं प्रविष्ट गर्न, र खुसी आवश्यक छ। छुट्टी भाडा धेरै स्रोतहरू सम्पत्ति एजेन्सी स्वामित्वमा छन्।
खैर, एक रोचक ढाँचा बजार तथाकथित बुलेटिन बोर्ड र निजी कम्पनीहरु मा टकराव एक प्रकारको छ। यी सेवाहरू प्रत्येक यसको लाभ छ। एजेन्सी मनसायलाई मालिक अनुगमन र ग्राहक कारोबार सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ भने, विज्ञापन मुक्त नियुक्ति संग साइटहरू जो कोहीले समायोजित गर्न सक्छन्। एक विशाल विकल्प र ग्यारेन्टी को कमी - फलस्वरूप।
इन्टरनेट मार्फत संक्षेप गर्न, आवास - यो छ लागत-प्रभावकारी सुविधाजनक, र सबैभन्दा महत्वपूर्ण - रहन ठाँउ को एक विस्तृत श्रृंखला कहीं फेला पार्न प्रस्तावहरूलाई रूपमा। अब प्रवृत्ति एक घर वा घर योजना को घोषणा गर्न एक लोकप्रिय संलग्न भएको छ। यो काम साधक उचित आवास छिटो फेला पार्न मद्दत गर्छ।
अपार्टमेंट बेच्न मिन्स्क मा किन यति खराब?
अपार्टमेन्ट बिक्री: कागजात र अर्डर लेनदेन। अचल सम्पत्ति लेनदेनको मर्मतका
"सलिन" लागूपदार्थको। प्रयोगको लागि निर्देशन
खट्टा क्रीम संग जिन्जरब्रेड। व्यञ्जनहरु स्वादिष्ट केक
लियोनिज इन्जिनबारोव: शरद ऋतुमा शरिर ऋतुको एक जोडा
कसरी एक निजी घरमा एक सेप्टिक ट्यांक गर्छ?
उपकरण, काम फोटो को चरणमा: आफ्नो हात संग स्नान मा फर्श कसरी बनाउने